• MF AGM • Ho an'ny fiara
Ny rafitra Start-Stop dia mihidy ho azy ary mamelona indray ny motera mba hampihenana ny fotoana tsy miasa, noho izany dia mampihena ny fandaniana solika sy ny entona.
Ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia misafidy ny hifanaraka amin'ny bateria CSPOWER amin'ny fiara Start-Stop izay miala amin'ny tsipika famokarana.
• AGM manomboka-stop bateria dia be mpampiasa ho an'ny fiara amin'ny rafitra fanombohana / mijanona.
• Modely amidy mafana: 12V 60AH 70AH 80AH 92AH 105AH
> Famintinana ho an'ny AGM Start- Stop Battery
Ny rafitra Start-Stop dia mihidy ho azy ary mamelona indray ny motera mba hampihenana ny fotoana tsy miasa, noho izany dia mampihena ny fandaniana solika sy ny entona.Ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia misafidy ny hifanaraka amin'ny bateria CSPOWER® amin'ny fiara Start-Stop izay miala amin'ny tsipika famokarana.
Rehefa mijanona amin'ny jiro mena, ohatra, ny fiara iray ka apetraka amin'ny neutre, dia mamono ny motera ny rafitra, mampihena ny fanjifana solika sy ny famoahana CO2.Ny bateria Start-Stop dia tsy maintsy manana angovo ampy hamerenana ny motera.Rehefa manindry ny pedal clutch vonona ny hisintona ny mpamily, na mamoaka ny pedal frein amin'ny fiara mandeha ho azy, dia mandeha ho azy ny motera.Tena zava-dehibe ho an'ny fiara Start-Stop ny fananana bateria azo antoka hamoronana sy hitahiry angovo.
Taratasy fanamarinana: ISO9001/14001/18001;CE / IEC ankatoavina
Ny teknolojia bateria fanombohana AGM dia nahomby tamin'ny patanty.Ny bateria CCA dia eo amin'ny 40% ambony noho ny bateria mahazatra.Ary miaraka amin'ny fiainana tsingerina lava kokoa, mety kokoa amin'ny fanombohana matetika.
Advanced grid famokarana teknolojia, ny bateria amin'ny tena tsara anti-corrosion fampisehoana noho ny vaovao firaka raikipohy sy nandroso mangatsiaka nanakodia Grid teknolojia.
Ny raikipohy tsara mandroso, ary ny teknolojia fanasitranana mitombina, ny fiainan'ny batterie dia mihatsara be.
Ny raikipohy ratsy mandroso dia manatsara ny fanekena ny fiampangan'ny batterie, ary ny bateria dia afaka mahazo ny tamberina avy amin'ny fiara haingana kokoa.
Teknolojia AGM, ny bateria dia tsy manana electrolyte ranon-javatra maimaim-poana, azo antoka sy sariaka ny tontolo iainana.
Ny famolavolana ara-drariny amin'ny rafitra anatiny, ny fahombiazan'ny famerenan'ny oksizenina avo lenta, tsy misy fikojakojana tanteraka.
Ny bateria dia afaka miasa amin'ny -40 ° C ~ 70 ° C mari-pana, ny fiainana bateria dia 2 heny noho ny mahazatra manomboka bateria.
Ny bateria fanombohana AGM dia ampiasaina betsaka amin'ny fiara misy rafitra fanombohana / fiatoana.
Manaraka: PV Solar Inverter
Marika nasionaly naoty
Volonta (V) naoty
Fahafahana (C20/Ah) Reserve
Fahaizana (min) CCA (A) refy (mm) Terminus lanja
halavan'ny sakany hahavony Mp
Batterie 12v 7ah azo averina Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Battery Ups ho an'ny solosaina Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie tsy misy fikojakojana Batterie cellule solaire